भुक्तानीको दौडधूप - News Today
मुलुकमा कोरोना महामारी तीव्र रुपमा बढेर गएको छ । यसले गर्दा जनता पीडामा छन् । सरकारले समस्यामा परेका जनताको संकट निवारणका लाग जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यस अनुपातले काम गर्न नसकेको भन्ने व्यापक असन्तुष्टी बढेर गएको छ । असन्तुष्टी नबढोस् पनि किन ?
खासगरी आयस्तर कमजोर भएका जनतालाई अहिले दिन दिनको समस्याले पिरोलेको छ । तर सरकारले तिनको पीडामा मल्हम लगाउन सकिरहेको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि अन्य सरसामानमा व्यापक रुपमा मूल्य बृद्धि भएको छ । महँगीबाट पनि तिनै विपन्न जनता बढी प्रभावित बन्न पुगेका छन् । उता असारे विकासको चटारो पनि यसैवेलामा परेको छ । निरन्तरको वर्षामा पनि निर्माण काममा तिव्रता यसै वेला आएको छ । तहारहतारमा काम गरेको देखाउन अनि भुक्तानी लिन व्यापक दौडधूप चलेको छ । यही कारणले कार्यालयमा प्रमुख तथा लेखापाललाई समेत भ्याईनभ्याई छ ।
एकातिर कोरोना, बाढी तथा बेरोजगारीले पिल्सिएका बहुसंख्याक जनतालाई दुई छाकको जोहो कसरी मिलाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । अर्कातिर गुणस्तर नभएपनि काम गरेको देखाएर सरकारी रकम भुक्तानी लिन दौडधूप चलेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता नसहने बताई रहेपनि व्यवहारमा यतिवेला त्यस्तै अवस्था देखिन थालेको छ । त्यसमाथि कालाबजारीयाले समेत चुस्न थालेपछि जनताले सन्तोषको अनुभूति कसरी गर्न पाउँलान् ?
Previous : सुभरनपट्टीबाट चोरी भएको स्कुटरसहित सरदार प्रहरी नियन्त्रणमा
Next : रुपनी गाउँपालिकामा छुट्टाछुट्टै घटनामा ३ जनाको मृत्यु